Barashada Dugsiga Hoose | Dugsiga Hoose - Dugsiyada Dadweynaha ee Ku Taagan Wali Biyaha ISD 834
Barashada Dugsiga Hoose
Daryeelka ardaydayada ugu yar
Hadday shaqsi ahaan u yihiin ama khadka tooska ah, waxaan u qabannaa wax walba oo karaankeenna ah si aan uga caawinno ardaydayada ugu da'da yar inay dareemaan isku xirnaan iyo guul. Macallimiinteena dugsiga hoose waxay diirada saarayaan dhisida cilaaqaadka carruurta iyo inay hubiyaan inaysan kaliya baran, laakiin ay kobcayaan!
Si Qunyar Socod Ah Ulaab - Iskuulka Ku Laabo
Dugsiga Hoose Ku Soo Laabashada Qorshihiisa
Ardayda dhigata fasalada K-2, iyo sidoo kale ardayda in badan oo ka mid ah barnaamijyadeenna khaaska ah, ayaa ku soo laaban doona dugsiga si shakhsi ahaaneed wax u barata Janaayo 27. Ardayda fasallada 3-5 waxay nagu soo biirayaan Febraayo 10. Qorshe gaabis ah, ardaydu waxay ku soo laaban doonaan dugsiga afar maalmood usbuucii waxayna sii wadan doonaan inay wax ka bartaan guryahooda maalmaha "C" inta lagu jiro bisha Febraayo. Jadwalka shan maalmood oo buuxa usbuucii ayaa bilaaban doona bisha Maarso.
Ku noqo waqtiga iskuulka:
Janaayo 25 & 26: Maalmaha Kala Guurka - Ma lahan iskuul ardayda K-5 “On the Dial”.
FIIRO GAAR AH: Kuwani waxay weli yihiin maalmo dugsiyeed caadi ah dhammaan 100% bartayaasha khadka tooska ah iyo dhammaan ardayda dugsiga dhexe iyo sare.
Janaayo 27: Ku noqoshada dugsiga ardayda fasalka K-2, barnaamijyada ku saleysan goobta iyo ALC
Febraayo 10: Ku noqoshada dugsiga ardayda fasalka 3-5
Maarso 1: On Dial ardayda fasalada K-5 waxay ku laaban doonaan dugsiga shan maalmood usbuucii.
Sidee ku noqoshada iskuulka u ekaan doontaa
Waxaan la socon doonaa tilmaamaha ugu dambeeyay ee gobolka iyo istaraatiijiyadyada yareynta si aan ugu soo dhaweyno ardayda iyo shaqaalaha sida ugu macquulsan uguna macquulsan. Sida moodelkeenna waxbarasho ee isku dhafan, ardaydu waxay la sii joogi doonaan koox-kooxeedkooda maalintii oo dhan si loo xaddido u-soo-gaadhista ardayda kale iyo shaqaalaha. Borotokoollo kale oo badan oo meesha yaal inta lagu guda jiro barashada isku dhafan ayaa sidoo kale sii ahaan doona - sida nadiifinta joogtada ah iyo jeermiska meelaha taabashada sare iyo isticmaalka wejiga daboola ardayda iyo shaqaalaha oo dhan. Maaskarada ka sokow, waxaad ogaan doontaa shaqaalaha xiran wejiga gaashaammada marar badan, iyo heer ammaan oo dheeri ah, waxaannu shaqaalahayaga u soo bandhigi doonnaa baaritaan joogto ah oo ah 'COVID-19'.
Basaska iskuulku waxay ku ordi doonaan ama ku dhowyihiin awooda, taas oo macnaheedu yahay ardayda qaar waxaa lagu lamaanayn karaa 2 ama 3 kursi. Windows-ka basaska waa la jajabin doonaa si looga caawiyo socodka hawada, marka ardaydu waa inay xirxiraan maalmaha qabow.
Labadaba wada-hawlgalayaasha A iyo B ayaa wadajir u iman doona dugsiga, sidaa darteed fasallada ayaa aad u buuxsami doona. Mar alla markii ay suurta gasho, 3 cagood oo kala fogaansho jireed ah ayaa lagu ilaalin doonaa ardayda dhexdooda.
Macalimiinta iyo shaqaaluhu waxay ilaalin doonaan 6 cagood oo ah kala fogaanshaha jir ahaaneed ee midba midka kale iyo ardayda, markay macquul tahay.
Maxaan kaa caawin karnaa inaad u hesho ardayda Dugsiyada Hoose?
Jadwalka maalinlaha ah ee ardayda dugsiga hoose
Ma u baahan tahay daryeel carruureed? (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Sannadkan barnaamijkeenna 'Adventure Club Club' wuxuu umuuqdaa waxoogaa ka duwan sanadihii kale. Iyada oo ku saleysan qaabka waxbarasho ee aan ku jirno, waxaan u soo bandhigi doonnaa qoysaska barnaamijyo daryeel carruureed ah maadaama ay bannaan yihiin.
Joogto maalmeedka Seesaw
Maalmaha waxbarashada guriga, ardaydu waxay u baahan doonaan inay galaan Seesaw si ay uga raadsadaan farriimaha iyo meeleynta macallinkooda.